မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Differences between Kill Me, Heal Me and Hyde, Jekyll and Me
Soul mate ကြိုက်တာချင်းတူ နေပြီ။ ama က KMHM ပဲကြည့်ရသေးတယ်။ H,J,Mတော့ဘယ် တော့စရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေတာ။ ama လည်းမင်းသမီးဘာလို့သရုပ် ဆောင် ညံ့ သွားလဲ လို့ထင်နေတာ။ အဝတ်အစားကစ။ secretary ဝင်လုပ်တော့လဲဘောင်းဘီအပြဲနဲ့။ဒါပေမဲ့မင်းသားကကောင်းနေတော့လဲ သည်း ခံရတာပေါ့။ သူတို့၂ယောက်လိုက်ဖက်မှုတော့ရှိပါတယ်လေ။ ဒါနဲ့nanaရဲ့ အကြောင်းကနောက်အပိုင်းမှာပိုရှင်းသွားအောင် ဖြေရှင်းထားတယ်။ပြီးအောင်ဆက်ကြည့်လိုက်နော်။
4/02/2015 9:07 PM
4/03/2015 1:37 AM
4/03/2015 1:38 AM
KMHM ကိုကြည့်တုန်းကလဲ DIDဇာတ်လမ်းအဆန်းမို့လို့ရယ် တခြားကြည့်စရာကားမရှိနေလို့ရယ်ကြောင့် ကြည့်ဖြစ်သွားတာ။ အဆုံးအထိ ပျင်းပျင်းနဲ့ကြည့်လိုက်ရတယ်။ မင်းသားက Hyun Binလိုမချောပေမယ့် သရုပ်ဆောင်ကောင်းတယ်။ မင်းသမီးကတော့ ပျင်းစရာကြီး။ ဒိပြင်မင်းသမီးနဲ့ဆိုရင် ပိုကောင်းမယ်လို့တောင် တွေးမိတယ်။ DID ကို ဒီတကားနဲ့တင် အီသွားလို့ Hyde,Jekyll and Me ကို တဆက်ထဲ ဆက်မကြည့်နိုင်တော့တာ။ မေ့လောက်ပြီဆိုတော့မှ ပြန်ကြည့်မယ်။
4/06/2015 1:22 PM
Drama review တို့ ခရီးသွားပိုစ့်တို့ဆိုရင် no another MaBaydar ပဲ ရှူထောင့်စုံအောင်တင်ပြတတ်တယ် ၂ ကားလုံးကိုကြည့်တယ် ညီမမြင်သလို တွေးသလို မမြင်ခဲ့ မတွေးခဲ့ဘူး အပျင်းပြေ ကြည့် တစ်ခါတစ်လေ ဘာသိဘာသာ နဲ့ပဲပြီးသွားတယ် အမှန်တိုင်းပြောရရင် HMJ ကိုအရင်မစသေးဘဲ စုထားလိုက်တာ တစ်ခြားကားတွေလိုက်ကြည့်တယ် KMHM ကို လဲမစဘူး အကြောင်းက မင်းသားကိုကြိုက်ပေမဲ့ မင်းသမီးကိုမကြိုက်ဘူး သူသရုပ်ဆောင်ကောင်းတာတော့လက်ခံတယ် ဘာကြောင့်မှန်းမသိ သူ့ အသံကိုမကြိုက်တာ နောက်တော့ ကြည့်စရာလဲနည်းနည်းပါးလာတာတစ်ကြောင်း ကောင်းတဲ့အသံထွက်လာတာရောနဲ့HMJ ကိုစုရင်း အချိန်ဖြန်ုးတဲ့အနေနဲ့ KMHM ကိုစလိုက်တာ အရှိန်ပါသွားတယ် :D KMHM က စုံသွားတယ် ဇာတ်အိမ်၊အချစ်၊အလွမ်း၊၀မ်းနည်း၊အက်ရှင် ပြီးတော့ဟာသ ဒါကြောင့်း ဒီကားက ပိုမဲရသွားတယ်လို့ ထင်တယ်. ၂ ကားလုံးမှာ မင်းသားတွေကိုကြိုက်တယ် KMHM က မင်းသမီး ညီမပြောသလို့ ရုတ်ရက်ခက်နေတာပဲ အိုဗာအော်တယ် ဒီကားထဲမှာ သူအိုဗာဖြစ်နေတယ် ဆံပင်ပုံစံကအစမကြိုက်တာ.. HMJ ထဲကမင်းသမီးကျတော့လဲ သွားမပေါအောင်တမင်များ ပိတ်ပြီးစကားပြောလားထင်ရတယ် တချိန်လုံးမျက်နှာက မရွှန်မလန်းနဲ့ အဆုံးတတ်ရရင် HMJ ကို အပိုင်း၁၅ နောက်ပိုင်းအာရုံနည်းသွားတယ် နောက်ဆုံးပိုင်းကိုမကြည့်ဖြစ်သေးဘူး kmhm တော့ပြီးသွားတယ် :) hunbin ko next drama tway mhar sat myaw nay tot mal :)
4/07/2015 2:05 PM
သန့်... နောက်ထပ် ကြည့်စရာကောင်းတဲ့ ကားတွေ မကျန်တော့မှပဲ ကြည့်တော့... Hyun Bin ကတော့ တအားချော...
Lotus Phyu - ခုလို အသေအချာ ကွန်မန့်ရေးပြီး အားပေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
မဗေဒါလို မမြင်တတ်ဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးကိုပြောတာလဲ? ၂ ကားကြည့်နေရင်းနဲ့ ဒီ ၂ကားက သူများတွေ နှိုင်းယှဉ်ပြောနေပေမဲ့ မတူပါဘူးဆိုတာ သတိမထားမိဘူးလား? အထူးသဖြင့် မဗေဒါ ပိုစ့်ကို ဖတ်ပြီး ကိုယ့်စိတ်ထဲ ခုလုခုလုဖြစ်နေတာတွေနဲ့ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်သွားတဲ့ အခါတွေရှိလား? မဗေဒါလဲ HJM ကို အပိုင်း ၁၈ ထိ ပြပြီးမှ အေးဆေး စကြည့်တာ... ဒါပေမဲ့ Hyun Bin ကို ကြည့်ပြီးရင်ကြည့်ချင်တာရော။ မင်းသမီး သရုပ်ဆောင် မကောင်းပေမဲ့ အဲ့မင်းသမီးနေရာလို ခပ်ချောချော ကောင်းလေးတစ်ယောက်တည်းကို မရိုးရတဲ့ စတိုင် ၂မျိုးနဲ့ တွဲရတာကို နည်းနည်းတော့ အားကျသား.. ခွိ.... မင်းသမီး သွားမပေါ်အောင် စကားပြောတယ်ဆိုတာတော့ အစ်မပြောမှ မဗေဒါလဲ စိတ်ထဲ ခုနေတာကြီး အဖြေပေါ်သွားတယ်.. အစ်မလဲ မဗေဒါ မမြင်တာတွေကို သေချာ ကြည့်တတ်တယ်။ မဗေဒါကတော့ ခုထိ KMHM ကို အပိုင်း ၁၈ က မတက်တော့ဘူး.. မင်းသမီး အသံရယ် Flashback တွေရယ်ကို တော်တော်လေး သည်းမခံနိုင်ဖြစ်နေတယ်...
တိတ်တိတ်လေးလာဖတ်ပြီးသွားပါပြီ။နှစ်ကားစလုံးဆုံးအောင်မကြည့်ရသေးပါ။ သူreview့ ရေးတာနဲ့ကော်မဲန်းတွေဖတ်တာနဲ့တင်ပြည့်စုံနေပီ။